Banyere Anyị - Suzhou Judphone-Auspicious Electronic Commerce Co., Ltd.
Dị ka ọkachamara ikuku disinfection na ọcha ngwọta eweta, Judphone nwere ihe karịrị 6 ahụmịhe afọ na R&D, n'ichepụta na ire ngwaahịa nhicha ikuku dị iche iche, dị ka roboti disinfection ikuku, nzacha ikuku na nzacha. Site na otu ndị ọkà mmụta sayensị dị elu, ndị injinia na ndị ọrụ nka, anyị nwere ikike imepụta ngwaahịa siri ike, ọrụ azụmaahịa dị ukwuu, yana ụlọ ọrụ nke anyị.OEM na ODM anabatara iwu.
Ịlụ ọgụ Covid-19, anyị na-aga n'ihu na-emepụta ihe ọhụrụ na ikuku ikuku na ngwọta dị ọcha, ka ndị mmadụ wee nwee ike ibi na gburugburu ebe obibi dị mma ma dị mma. Ngwaahịa anyị agafeelaCE/ROHS/EN1822-1 na ụfọdụ ule ndị ọzọ.
Dabere na UV-C ultraviolet dị elu na robot mkpanaka kwụụrụ onwe, yana ijikọ na teknụzụ plasma, a na-emepụta roboti disinfection UV-Plasma ngwa ngwa anyị, nke a na-ejikarị eme ihe maka ikuku ikuku (Virus, bacteria, ma ọ bụ fungi nwere ike gbasaa). N'ikuku site na iku ume, ikwu okwu, ụkwara, imi, uzuzu, ma ọ bụ ọrụ ọ bụla na-emepụta ikuku aerosol ma ọ bụ mmiri mmiri. ), Ngwọta elu (Saliva na ụmụ irighiri mmiri na-emepụta mgbe ndị mmadụ na-asụ ụkwara ma ọ bụ na-ekupụ ume, ọtụtụ n'ime ha na-adaba n'elu elu na ihe ndị dị nso, dị ka tebụl ma ọ bụ telifon. anya, ntị, ọnụ na imi), na mkpochapụ ihe (Nje virus nwere ike ịdị ndụ n'elu ihe ruo ụbọchị 5, ya mere ihe ize ndụ nke ibute ọrịa dị elu karịa mgbe ị na-akpọtụrụ ihe ndị dị mkpa kwa ụbọchị ma ọ bụ òkè equ). ngwa. Ịsachapụ akụkọ ihe mere eme kwa ụbọchị na nke ejigharịrị ọzọ nwere ike inye aka mee ka nje virus na nje bacteria kwụsị ọrụ n'elu ihe ahụ). Enwere ike iji robots na-ekpochapụ ọrịa anyị n'ụlọ ọgwụ, ebe a na-ahụ maka ọrịa, ụlọ ọrụ ọgwụ, ụlọ ọrụ nri, ụgbọ okporo ígwè, na ụlọ akwụkwọ.
A na-ebuga robọtị ikuku akọrọ akọrọ na ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ akụ yana ọdụ ụgbọ elu. A na-etolite ikuku akọrọ site n'ịkwasa 7.5% hydrogen peroxide ngwọta site na oghere pụrụ iche n'okpuru nrụgide anụ ahụ, ka ọ bụrụ ihe na-eme ka submicron sterilization na steeti akọrọ, nke nwere ike ịgbasa n'ime ikuku. Na hydrogen peroxide dị na steeti a na-eme ngwa ngwa na nje bacteria na microorganisms ndị ọzọ na-akpata ọrịa na gburugburu ebe obibi, nke nwere ike n'otu oge na-achọpụta ezigbo disinfection na ikuku na ihe elu.
N'ime ihe nzacha ikuku na ihe nzacha ikuku, enwere ọtụtụ teknụzụ na ihe eji eme ikuku dị ọcha, nke na-enyere ha aka ịnye ndị ọrụ anyị ikuku dị ọcha na nchekwa. Nkà na ụzụ na-eme ka ikuku dị ọcha bụ: teknụzụ mgbasa ozi, teknụzụ na-adịghị mma (nke ọma) ion technology, teknụzụ catalytic, teknụzụ photocatalyst, nkà na ụzụ photomineralization superstructure, teknụzụ HEPA dị mma filtration, teknụzụ nchịkọta uzuzu electrostatic, wdg. sịntetik eriri, HEAP ịrụ ọrụ nke ọma ihe, anion generator, wdg. Anyị ikuku purifiers absorbs, decomposes na transforms dị iche iche ikuku pollutants (n'ozuzu na-agụnye pm2.5, dị ka ájá, pollen, peculiar isi na formaldehyde icho mma mmetọ, ezi m nje bacteria, - mbụ. , wdg), ma na-abawanye mma ikuku maka ebe obibi, azụmahịa, yana ụlọ mmepụta ihe.
Ụlọ ọrụ nwanne anyị nwanyị, Jiangsu Judphone International Logistics Co., Ltd., bụ ụlọ ọrụ logistics nwere ahụmahụ afọ 12 na mbubata na mbupụ n'ọdụ ụgbọ njem mba ụwa. Site na nkwado ya na imekọ ihe ọnụ, ọnụ ahịa ụgbọ njem nke ngwaahịa anyị ebelatala nke ukwuu, na-enye ngwaahịa anyị ọnụahịa arụmọrụ ka mma.